Tue, Jul 7, 2020 at 8:57pm
रासायनिक मलको समुचित प्रयोगका बारेमा जानकारी दिन शुरु
काठमाडौँ, २० कात्तिक : साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले रासायनिक मलको समुचित प्रयोगका बारेमा कृषक तथा सहकारी संस्थालाई जानकारी दिन शुरु गरेको छ । यसका लागि कर्पाेरेशनले भारतको साई मल उद्योगको सहकार्यमा विराटनगर, इलाम, जनकपुर, वीरगञ्ज, भरतपुर, भैरहवा, दाङ, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर लगायतका स्थानमा आजदेखि तालीम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । काठमाडौँ, नुवाकोट, धादिङ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेमा आइतबारदेखि तालीम सञ्चालन शुरु भएको कर्पाेरेशनका..
सौर्यबत्तीबाट मोरङका ७० घरपरिवार लाभान्वित
काठमाडौं कार्तिक १५। टुुकीको भरमा रहँदै आएका मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका बासिन्दा सोलार बत्ती जडानपछि खुशी भएका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत मिक्लाजुुङमा सोलार मिनिग्रिड स्थापना गरिएको हो । सरकारको रु एक करोड ६० लाखको लागतमा मिक्लाजुङ गाउँपालिका– १ मा स्थापना गरिएको सोलार मिनिग्रिडबाट ७० घरपरिवार लाभाविन्त भएका छन् । विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुुग्न नसकेको उक्त स्थानमा ३० किलोवाटको सोलार मिनिग्रिड सञ्चालनमा आएको..
आलुको नगरकोट ब्राण्ड घोषणा
भक्तपुर, कार्तिक १४ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत भक्तपुरमा आलु जोनका रुपमा रहेका क्षेत्रलाई आलुको ब्राण्ड बनाई बजार व्यवस्थापन गर्न यहाँका किसान जुटेका छन् । किसान कै सक्रियतामा आलु जोन समिति गठन गरी एक हजार ४७० कृषकको १४२ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सामूहिक खेती शुरु भएपछि कृषक आफैँ आलुको ब्राण्ड निर्माण गरी बजारको व्यवस्थापनमा जुटेका हुन् । परियोजनाअन्तर्गत सुडाल र ताथलीलाई गत वर्ष आलु..
उच्चहिमाली भेगमै मध्यपहाडका फलफूल, स्याउ पाउने ठाउँमा टिमुर
जुम्ला। एक दशकअघि उच्च हिमाली भेकमा हलुवावेद नाम सुन्दा यो के हो भनेर सोध्ने गरिन्थ्यो। अनार फल त दारिमजस्तै हुँदो रहेछ, यो हाम्रो ठाउँमा फल्छ होला र? भनेर अड्कल काटिन्थ्यो। अमिलो लिन कालीकोट, दैलख र सुर्खेतसम्म पुग्थे, जुम्लीहरु। टिमुर नासोको रुपमा जाजरकोटबाट मगाइन्थ्यो। अहिले यी सबै कुरा जुम्लामै फल्न थालेका छन्। समुद्री सतहदेखि करिब दुई हजार ३०० मिटर उचाइमा रहेको चन्दननाथ–३ को सिमखाडा..
इलामकी उषा निरौलाको 'भ्यालुएड बिजिनेस', मासिक डेढ लाख कमाइ
इलाम। भनेजस्तो मूल्य नपाएर अधिकांश किसानको अदुवा बारीमै कुहिँदै गएको बेला अदुवा प्रशोधन गरेर यहाँकी एक महिलाले लाखौँ आम्दानी गरिरहेकी छन्। इलाम नगरपालिका–७ की उषा निरौलाले अदुवाको विभिन्न परिकार बनाई बिक्री गरी लाखौँ आम्दानी गरिरहेकी हुन्। उनले अदुवा प्रशोधनबाटै आफ्नो परिवार मात्रै पालेकी छैनन् नगरपालिकाभित्रै जग्गा किनेर सामान्य घरसमेत बनाएकी छिन्। छोरीलाई काठमाडौँ राखेरसमेत पढाइरहेकी छिन्। विसं २०६८ देखि सामान्य तालीम लिएर..
मात्र चालिस हजारको लगानीले डेढ वर्षमै दशलाख बढीको कमाई
बुधबार, कार्तिक ८, २०७४ साल
गुल्मी। गुल्मीका एक युवाले ४० हजार रुपैयाँमा डेढ बर्षमै १० लाख रुपैयाँ कमाएका छन्। जापान छाडेर आफ्नै गाउँमै व्यावसायिक केराखेती गरेर उनले आम्दानी गरेका हुन्। मुसिकोट नगरपालिका–१ भर्माचौर निवासी ४४ वर्षीय चन्द्रमणि घिमिरेले व्यावसायिक केराखेतीसँगै मेवा, खुर्सानी र कुखुरापालन व्यवसायबाट झण्डै डेढ वर्षमा १० लाख आम्दानी गरेका हुन्। घिमिरेले झण्डै चार रोपनी जग्गामा एक वर्षयता आफ्नै खेतमा ४० हजारको लगानीबाट २८० केराको..
विद्युतीय सवारीका लागि 'चार्जिङ स्टेशन' स्थापना हुँदैछ : प्राधिकरण
३१ असोज, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनका लागि अत्यावश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने भएको छ । यसबाट प्रत्यक्षरुपमा विद्युतीय साधनहरु प्रशस्त मात्रामा देश भित्र्याई पेट्रोलियम पद्धार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने कार्यक्रमलाई बढावा मिल्ने देखिएको छ । स्मरण रहोस् – आगामी असारदेखि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरु हुने भएकाले सिङ्गो मुलुक नै विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगको प्रक्रियामा..
मदिरा उत्पादन छाडी व्यावसायिक पशुपालनमा,सहकारीबाट बिनाधितो ऋण
शुक्रबार, असोज २७, २०७४ साल
पाल्पा। रिब्दिकोट गाउँपालिका–६ ठिमुरे इजरडाँडाका बासिन्दा मदिरा उत्पादन छाडेर व्यावसायिक पशुपालनमा लागेका छन्। उनिहरुले पहिला वर्षौंदेखि दैनिक ठूलो परिमाणमा मदिरा उत्पादन गरेरै परिवार पाल्ने गरेका थिए। मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन गरी बिक्री–वितरण गर्दा समाजमा नराम्रो छाप परेपछि उनीहरुले व्यवसाय नै परिवर्तन गरी गाई पाल्न शुरु गरेका छन्।गत वर्षबाट गाउँका १८ घरपरिवारले मदिरा उत्पादन छाडेर उन्नत जातका २/२ वटा गाई पाल्न शुरु गरेका छन्। व्यवसायका लागि..
चितवनको पोल्ट्री एक्स्पोमा अमेरिका, चीन, फ्रान्सका व्यवसायी सहभागी हुँदै
चितवन। नेपाल पोल्ट्री महासंघले यहाँ गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय पोल्ट्री तथा लाइभस्टक एक्स्पो, २०१७ को तयारी तीव्र पारेको छ । आगामी कात्तिक १७ गतेदेखि तीन दिनसम्म भरतपुरको औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलमा एक्स्पो हुँदैछ । महासंघका उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलका अनुसार एक्स्पोमा विदेशी १०० वटा र नेपाली १०० वटा कक्ष रहने छ । भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्सलगायत देशका व्यवसायीले कक्ष बुकिङ गरिरहेका छन् । करिब १२..
सरकारद्वारा बाढी प्रभावित ३० जिल्लामा राहत वितरण सुरु !
काठमाडौं । सरकारले गएको वर्षायाममा बाढी–पहिरोले कृषि क्षेत्रमा क्षति पु¥याएका सम्बन्धित पीडित किसानहरुलाई राहत वितरणको काम सुरु गरेको छ । सरकारले आइतबारदेखि बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित ३० जिल्लामा राहत पठाउने काम सुरु गरेको हो भने सोमबारसम्ममा प्रभावित जिल्लामा राहत पठाउने काम सकिने कृषि विभागले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा क्षति भएका कृषकहरुको लागि जम्मा १ अर्ब २५ करोड ५६..
मुस्ताङमा १३.६ मेगावाटको थापाखोला जलविद्युत् निर्माण, तिहार अघिनै लाइनमा
मुस्ताङ।मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका– १ टुकुचेमा १३.६ मेगावाट क्षमताको थापाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् तिहार अघिनै केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने तयारी भइरहेको छ ।माउण्ट कैलाश इनर्जी प्रालिले आयोजनाको बाँध, सुरुङ, फोरवे, पेनस्टक, पावरहाउस निर्माण र उपकरण जडान सकिएपछि भदौको पहिलो हप्तादेखि परीक्षण उत्पादन शुरु गरेको हो । असोज अन्तिममा केन्द्रीय लाइनमा बिजुली जोड्ने तयारी गरेको आयोजनाका साइट म्यानेजर..
‘गेजुवाले बुढीगण्डकीको काम अगाडि बढाए निर्माणस्थलमै पुगेर रोक्ने’
काठमाडौं । सांसदहरुले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले आफ्नो काम अगाडि बढाए निर्माण स्थलमै पुगेर रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद कमला पन्तले कुनैपनि हालतमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई काम अघि बढाउन नदिने उल्लेख गरिन् । गेजुवाले ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना बनाउन १० वर्ष लगाएको एवम् चिलिमे नै निर्माण..
राजधानीमा हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो हुँदै, १ सय ५० बढी विदेशी स्टल रहने
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (आइपान) तथा एक्स्पो एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिले संयुक्तरुपमा हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो गर्ने पक्का भएको छ । आगामी पुस २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा एक्स्पो २०१८ हुने भएको हो । ३ सयभन्दा बढी स्टल रहने उक्त एक्सपोमा जलविद्युत प्रवद्र्धक, इक्वीप्मेन्टस् सप्लायर, लगानीकर्ता, बैंक, जलविद्युतमा नयाँ प्रविधि र निर्माणसँग सम्बन्धित स्टल राखिने..
वर्ष दिनमै ३ प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटाउने कुलमानको ‘कूल’ योजना
३० भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो वर्षमा विद्युत् चुहावट तीन प्रतिशतले घटाउने योजना बनाएको जानकारी दिएका छन् । साथै, कम्तीमा पनि तीन प्रतिशतले विद्युत चुहावट घटाउनका लागि आफू मातहतका कार्यालयहरु एवम् सम्बद्ध सबैलाई आफूले निर्देशन दिइसकेको समेत कुलमानले बताएका हुन् । कुलमानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककोरुपमा जिम्मेवारी सम्हालेको वर्ष दिन पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा..
नुवाकोटस्थित त्रिशुली थ्री ‘ए’ को सुरुङ खन्ने काम अन्तिम चरणमा
नुवाकोट । चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) ले निर्माण गरिरहेको त्रिशुली थ्री ‘ए’ को सुरुङ खन्ने काम अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत २०७२ साल बैशाखमा गएको विध्वंशकारी भूकम्पका कारण झन्डै २ वर्ष काम रोकेको सीजीजीसीले गत साउन फेरी आफ्नो काम आरम्भ गरेको थियो । भूकम्पले ध्वस्त पारेको पहुँच मार्ग नेपाली सेनाको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएपछि ठेकेदार कम्पनीले काम..
हुने भो अब बूढीगण्डकीको 'मुआब्जा' वितरण...!
काठमाडौँ – अर्थ मन्त्रालयले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ । अर्थले सोमबार मुआब्जा वितरणका लागि चालु आवमा विनियोजित रु १० अर्ब रकम स्थानीय प्रभावितलाई वितरणका लागि अख्तियारी दिएको हो । बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति खारेज भइसकेको र आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेकाले संरचनागत रुपमा कसलाई रकम दिने भन्नेमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै बजेट विनियोजन..
सुदूरपश्चिममा हट्यो लोडसेडिङ, सवस्टेशन र ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाइयो
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कैलालीको लम्कीमा रहेको सवस्टेशन र ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि गरेपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा रहेको विद्युत् प्रणालीमा रहेको भोल्टेजको समस्या समाधान भएको छ। प्राधिकरणले सोमबार लम्कीस्थित सवस्टेशनलाई १३२/३३ केभी क्षमतामा स्तरोन्नति गरेको हो। आठ एमभीए क्षमतामा रहेको ट्रान्सफर्मरलाई पनि १६ एमभीएमा रुपान्तरण गरिएको छ। लम्कीमा रहेको ट्रान्सफर्मरको स्तरोन्नति गरिएपछि टीकापुर र लम्की क्षेत्रमा भइरहेको अघोषित विद्युत्भार कटौती अन्त्य हुने भएको..
तीस मेगावाट क्षमताको पिके हाइड्रोपावर प्रालिमा रुसले पाँच अर्ब १० करोड लगानी गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग लगानी तथा प्रवद्र्धन बोर्डको आज बसेको बैठकले उक्त आयोजनामा रुसको लगानीलाई स्वीकृति दिएको उद्योग विभागका महानिर्देशक शंकर अर्यालले जानकारी दिए। पिके हाइड्रोपावर रामेछाप, ओखलढुंगा र दोलखाको सिमानामा पर्ने लिखु खोलामा अवस्थित छ । उद्योग मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको..
घरमा बिजुली नआए सिधै ‘उर्जा’ मा निःशुल्क फोन गर्नुस् !
काठमाडौं– यदि तपाईंको घरमा कुनैबेला बिजुली गएमा अब सिधै उर्जामन्त्रालयले उपलब्ध गराएको टोल फ्री नंबर ११५१ मा निःशुल्क टेलिफोन गरि आफ्नो समस्या टिपाउन सकिने भएको छ । यही सोमबार ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रालयको सो टोल फ्रि नम्बर सार्वजनिक गरेका हुन् । त्यस अवसरमा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मन्त्री शाहीले टोल फ्री नंबर ११५१ सार्वजनिक गरेका हुन् । यससँगै हरेक सर्वसाधारणले अब..
भारतबाट ‘फल्ट लोकेटर’ ल्याएपछि माडीको विद्युत सेवा पुनः सुचारु
चितवन । गत ४ साउनदेखि महिनादिनसम्म माडी क्षेत्रको विद्युत सेवा अवरुद्ध भएपछि छिमेकी भारतको सहायताबाट त्यसको व्यवस्थापन मिलाइएको छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने विद्युतमार्गमा भएको गड्बडी नेपाल पक्षबाट पत्ता नलागेपछि बिग्रिएको ठाउँ पत्ता लगाउने उपकरण ‘फल्ट लोकेटर’ भारतबाट ल्याइएको हो । फल्ट लोकेटर उपकरण नेपालसँग उपलब्ध नभएकाले भारतको राजधानी नयाँदिल्लीबाट उक्त उपकरण ल्याइएको थियो । विगत डेढ महिनादेखि उक्त क्षेत्रमा बिजुली अवरुद्ध भएको..
महाकालीको ३ प्रतिशत पानी अन्य प्रयोजनमा लगाउन नेपाल राजी
काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका क्रममा महाकाली नदीको ३ प्रतिशत पानी अन्य प्रयोजनमा लगाउन नेपाल तयार भएको छ । तर, भारतलाई तल्लो शारदाको लागि कर्णालीको पानी नदिने अडान भने नेपालले यथावतै कायम राखेको छ । हालैको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर एक महिनाभित्र तयार गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार डीपीआरबारे छलफल गर्न विज्ञ समूहको..
Results 1101: You are at page 37 of 37
First Prev 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37